संक्रामक रोग र प्रयोगशाला भवन शिलान्यास | eAdarsha.com
संक्रामक रोग र प्रयोगशाला भवन शिलान्यास
पोखरा । कोरोनाको दोस्रो लहर बढेसँगै पोखरास्थित प्रदेशको कोभिड अस्पताल भरिएको वैशाख दोस्रो सातामै हो । प्रदेशका ११ सहित छिमेकी जिल्लाबाट उपचारार्थ आउने बिरामीको चाप बढेपछि पोखरा–३० स्थित संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्पतालमा धेरैले बेड पाउन सकेनन् । गण्डकी प्रदेश सरकारले लेखनाथ सामुदायिक लायन्स अस्पतालको स्वामित्व रहेको सो अस्पताललाई गत साउन १ मा आफू मातहत ल्याएर कोभिड उपचार थालेको हो ।
कोरोनाको पहिलो लहरसँगै प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालय, पोखराले आफैले पिसिआर चेक गर्ने भयो । केन्द्रबाट पिसिआर मेसिन पनि आयो तर मेसिन कहाँ राख्ने चिन्ता भयो । केही दिनपछि क्षयरोग अस्पतालको प्रयोगशालामा राखेर काम सुरु भयो । अहिलेसम्म पनि अरुकै भवनको प्रयोगशालाबाट प्रदेशभरिका कोरोना संक्रमितको स्वाब परीक्षण हुँदै आएको छ ।
कोरोनाको दोस्रो भेरियन्टको संक्रमणदर उकालो चढिरहँदा प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङमा पनि कोरोना पोजेटिभ देखियो । आइसोलेसनमै रहँदा राजीनामा दिए । वैकल्पिक सरकार गठन हुने मेसो नआएपछि प्रदेशसभामा ठूलो दलको हैसियतमा उनै गुरुङ दोस्रो पल्ट मुख्यमन्त्री बने । मन्त्रिमण्डल बिस्तार गर्ने क्रममा आफैँले स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मा लिए ।
मुख्यमन्त्रीले सरुवा रोग अस्पतालसँगै प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको भवन शिलान्यास गरेका हुन् । उनले शल्यक्रिया कक्ष र ७ वेडको आइसियू वार्ड उद्घाटन पनि एकै दिन गरे ।
स्वास्थ्य मन्त्रीको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका मुख्यमन्त्री गुरुङले सोमबार ३ महत्वपूर्ण कार्य गरे । प्रदेशमा कोरोना संक्रमितले बेड नपाएको र आफ्नै ल्याब नभएपछि तत्काल बनाउने गरी उनले संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्पताल परिसरमा सरुवा रोगको अर्को भवन र प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको शिलान्यास गरेका हुन् । २ भवन शिलान्याससँगै अस्पतालको शल्यक्रिया कक्ष र ७ वेडको आइसियू वार्डको उद्घाटन पनि गरेका हुन् ।
मुख्यमन्त्री गुरुङले भवन निर्माण कार्य तीव्र रुपमा अगाडि बढ्ने बताए । धेरै लामो अध्यनपछि डिजाइन तयार गरेर टेन्डर अन्तिम चरणमा रहेकाले शंका मान्नुपर्ने कुनै कारण नभएको उनको दाबी छ । संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्पताललाई नेपालकै नमुना अस्पताल बनाउने अभियानको सुरुवात शिलान्यास गरेर भएको उनले बताए । प्रदेशमा जटिल खालको बिरामी हेर्ने दक्ष प्राविधिक कमी देखिएको कारण त्यसतर्फ पनि आफूले सोचेको उनको भनाइ छ । प्रदेश सरकार अहिले बजेट निर्माणको चरणमा रहेको बताउँदै बजेटमा जनताको जीवनरक्षाको विषय पहिलो प्राथमिकता र बाटोपुल दोस्रो चरणमा आउने जनाए ।
गण्डकी प्रदेशको सहरी विकास आयोजना मार्फत ५३ करोड ७५ लाख रुपैयाँ लगतमा ३ वर्षभित्र ५० बेड क्षमताको भवन तयार हुने संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्पतालका निर्देशक डा. विकास गौचनले जानकारी दिए । २ चरणमा गरी बनाउन लागिएको भवनमा पहिलो चरणमा ५० बेडको तयार गरिने सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव विनोदबहादुर कुँवरले बताए । अर्को चरणमा ५० बेडसहित हेलिप्याड सहितको भवन तयार गरिने उनले सुनाए । अहिले भइरहेको भवनभन्दा केही माथि ६ हजार ३ सय ३५ वर्ग मिटरको क्षेत्रफलमा चारतले भवन बन्ने भएको हो । डिजाइन तयार सकेर टेन्डर प्रक्रियामा गइसकेकोले केही दिनमै निर्माण सुरु हुने कुँवरले जानकारी दिए ।
संघ सरकारको २६ करोड सहयोगमा बन्न लागेको भवनको बाँकी रकम प्रदेशबाट प्राप्त हुने अस्पतालका निर्देशक डा. गौचनको भनाइ छ । पहिलो चरणमा ५० बेडको बनाउने भनिए पनि ७० वटा बेड व्यावस्थापन गर्न सकिने गौचन बताउँछन् । भवन सम्पन्न हुँदा एड्भान्स लेभलको आइसियूदेखि एचडियू, आधुनिक शल्यक्रिया कक्ष, प्रयोगशाला कक्ष, तालिम हल बन्ने उनले बताए । भवन निर्माणपछि प्रदेशका सरुवा रोगबाट बिरामी भएकालाई अरु अस्पताल रिफर गर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य हुने उनको दाबी छ ।
सरुवा रोग अस्पतालमै बन्न लागेको प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको लागत १४ करोड ३० लाख रहेको संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ कास्कीका इन्जिनियर झपट थापाले जानकारी दिए । तीनतले भवनमा हलसहित प्रयोगशाला कक्ष र स्टाफ कक्ष हुने छन् । सहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालयले बनाउने भवन १८ महिनामा सक्ने लक्ष्य लिइएको छ ।
प्रयोगशाला बनिसकेपछि ढुक्कसँग आफ्नै भवनमा सबै काम गर्न सहज हुने प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला पोखराकी प्रमुख सपना सुवेदीले बताइन् । ‘अहिले पिसिआर चेक गर्ने ल्याब क्षयरोगको ल्याब हो । सबै सेटअप गर्न सजिलो भएको कारण प्रयोग गरिएको हो,’ सुवेदीले भनिन्, ‘हाम्रो भवन भइसकेपछि कोरोना मात्र नभएर सर्ने–नसर्ने सबै रोगको प्रयोगशाला सुचारु गर्न सकिन्छ ।’